I-GParted 1.1 ikhishwe ngokuthuthuka okuthile nezindaba | Kusuka kuLinux
I-GParted 1.1 ikhishwe ngokuthuthuka okuthile nezindaba
I-GParted ingomunye wabahleli bokuhlukanisa okuhle kakhulu uzothola i-GNU / Linux. Ungayisebenzisa kusuka kuhlelo lokusebenza noma kusuka ku-Live uma uthanda. Yiba ngangokunokwenzeka, isikhombimsebenzisi sayo esilula kanye nezinketho ezinamandla zokuyakha kuyenza ibe ngesinye sezinhlelo eziyinkimbinkimbi kakhulu kulesi sigaba. Futhi, ingasetshenziselwa ukuxazulula ezinye izinkinga ngokuhlukanisa, amatafula wokwahlukanisa, njll.
Itholakala ezinqolobaneni eziningi zesoftware yokusabalalisa ukuze ukwazi ukuyifaka kalula ngomphathi wephakeji ohambisanayo noma ezitolo zohlelo lokusebenza. Yebo, uma usumazi vele, kufanele wazi ukuthi usehambile inguqulo entsha GParted 1.1.0. Izithelo ezintsha zomsebenzi onzima wabathuthukisi bawo ukusinikeza ithuluzi elingcono kakhulu kunangezinguqulo zangaphambilini.
UCurtis Gedak ukhiphe le GPated 1.1.0 ongayilanda ukuyifaka kusuka manje, ngalokhu kuvuselelwa kwesondlo okusha lapho kufakwe khona amabala athile lungisa izimbungulu, ukuthuthuka ngokuhunyushwa kohlelo ngezilimi ezithile, ngisho nokunye ukuthuthuka okusha. Izinguquko zifaka ukwamukelwa kwe-minfo esheshayo ne-mdir yokufunda iSudo kusuka kuzingxenye ezifomathiwe ze-FAT16 ne-FAT32, kanye nokukwazi ukubala usayizi wamahlukanisi we-JFS ngokunembe kakhudlwana.
Futhi, lokhu kukhishwa kwe-GParted 1.1.0 kufaka phakathi ukusekelwa kokubona I-ATARAID, ithole isimo sayo esimatasa, futhi ithuthukise ukuhamba kwesahlukaniso esibethelwe se-LUKS. Ukuncika kokusebenza kwe-xvfb okudingekayo kuze kufakwe isheke nokwenza amathuluzi we-distcheck ngesikhathi sokwakhiwa kwale software uma usebenzisa imithombo.
Kepha amaphutha axazululiwe Unezinkinga ezimbalwa abanye abasebenzisi abazibikile noma ezitholwe yithimba lokuthuthukisa selokhu kukhishwe inguqulo yangaphambilini. Imilayezo eyethulwe ngesikhathi sokusetshenziswa noma eyivimbele ukuthi isebenze kahle kwezinye izimo.
Uma unentshisekelo yokulanda inguqulo yakamuva - Iwebhusayithi esemthethweni yephrojekthi
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-GParted 1.1 ikhishwe ngokuthuthuka okuthile nezindaba
Uma usebenzisa i-plasma, ngincoma ukusebenzisa umphathi we-kde wokwahlukanisa (kuma-distros amaningi iphakethe libizwa ngokuthi yi-partitionmanager) esikhundleni salokhu.
Kunabantu abaningi laphaya abangazi nokuthi likhona njengoba wonke umuntu ehlohlwa. Yize zisuselwa kumtapo wezincwadi ofanayo, kubukeka kunobungane kakhulu kimi futhi kunezengezo ezithile ezijwayelekile zomhlaba we-kde futhi ngoba kwezinye izikhathi kungikhiphile enkingeni (ikakhulukazi ngezinsimbi ezifakwa kuma-fat32) kunokuba ngisho namawindi .ungalungisa futhi okuwuhlelo lwefayela lomhlaba wakho.
Ekusebenziseni engikunikeze bobabili, obekungelona iqiniso ngokweqile, le-plasma ibonakala ifaneleka kakhulu kimi kepha hheyi, imibala yenzelwe ukuthanda.
Inqubekela phambili nentuthuko yezenhlalo nge-Free Software noMthombo Ovulekile
Amalayisense Esoftware Akhululekile Navulekile